China EL ကြော်ငြာ EL Mask EL Cap EL အင်္ကျီ EL Ties EL Backlight EL Tape EL WIRE ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Xinhui
ထုတ်ကုန်အမည်:Electro Luminescent /EL Cool Light/EL Luminescent Plate/EL Backlight/EL Luminescent Mask/EL Luminescent Mark/EL Luminescent Mask/EL Luminescent Glasses/EL Luminescent Line/EL Luminescent အဝတ်အစား/EL Luminescent ကြော်ငြာ
လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း (Electro Luminescent) (EL,EL) အအေးခံပြားသည် နှစ်ဖက်စလုံးရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ AC ဗို့အားသက်ရောက်သည့် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားစေသော ဓာတ်ကွက်လပ်ဖြာထွက်မှုဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
အလင်းရင်းမြစ်၏ ကွဲပြားသောအရောင်များကို ထုတ်လုပ်ရန် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းသောအလင်းရောင်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မရှိခြင်း၊ အရောင်ကွဲပြားခြင်း၊ တာရှည်ခံခြင်း၊ အပူမရှိခြင်း နှင့် အခြားဝိသေသလက္ခဏာများပါရှိသောကြောင့် အအေးခံရင်းမြစ်ဟု အများသိကြသော ရိုးရာနှင့် ကွဲပြားပါသည်။ ပွိုင့် သို့မဟုတ် လိုင်းဖြာထွက်မှု ယန္တရား။
ဒါပေမယ့် တူညီတဲ့ မျက်နှာပြင် တောက်ပြောင်တဲ့ ကိုယ်ထည်၊ ဒါပေမယ့်လည်း အမြင်အာရုံက အလင်းပြန်မှု မဖြစ်စေဘဲ ထိခိုက်မှု မရှိသလို ပျော့ပျောင်းမှု အပြည့်ရှိတဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် အလင်းရင်းမြစ်ကို ဖြတ်တောက်နိုင်ပါတယ်။
အအေးခံအလင်းစာရွက် (EL (Electro Luminescent)၊ စက္ကူကဲ့သို့အလင်း၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ ဖြုတ်တပ်ရလွယ်ကူသည်၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှုမြင့်မားသော၊ ကာဗွန်နည်းသော၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်မှု၊ ထူးထူးခြားခြားဆန်းသစ်သော၊ ခေတ်ဆန်သော၊ တက်ကြွသောအကျိုးသက်ရောက်မှု။
ထို့ကြောင့်, မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပကြော်ငြာ applications များတွင်အလွန်ကောင်းသောရလဒ်များဖြစ်လိမ့်မည်။
El Cold Light Sheet သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်မှ အလင်းစွမ်းအင်သို့ အသွင်အပြင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အလုပ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အပူမထုတ်သောကြောင့် အအေးအလင်းရောင်ဟု အများအားဖြင့် လူသိများသည်။
လက်ရှိတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းသည် el cold light ကို နောက်ခံအလင်း၊ တောက်ပသောဖလင်၊ တောက်ပသောထုတ်ကုန်များအဖြစ် ခေါ်ဆိုသည်။
1. ကနဦးတောက်ပမှု- ≥ 30 CD၊ ဖိအားပေးပြီးနောက် အမြင့်ဆုံးတောက်ပမှုသည် 750CD ဖြစ်သည်။
2. ဗို့အားအကွာအဝေး: AC50V-220V။
3. ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား- 200HZ-1500HZ။
4. ပါဝါ- ≤ 0.8MW/CM။
5. လက်ရှိ- ≤ 0.15MA/CM။
6. အထူ- ≤ 0.5MM။
1. ထည့်သွင်းဗို့အားအကွာအဝေး- 50V-220V။
2. အထွက်ဗို့အားအကွာအဝေး: 80V-180V။
3. ကြိမ်နှုန်း- 400HZ-1000HZ။
4. အထွက်ပါဝါ: 1-1200W။
ကွန်ပျူတာနှင့် ကွန်ပျူတာ အပိုပစ္စည်းများ၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ LCD ပရိုဂျက်တာများ၊ စသည်တို့သည် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များတွင် EL အအေးဖလင်ပြားကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည် ဆန်းသစ်၊ ပေါ့ပါးပြီး၊ ခေတ်ဆန်သော၊ လှပသော၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊
ဒါမှ အပိုတန်ဖိုးတွေ တိုးလာပြီး အမြတ်တွေ ဖန်တီးတယ်။
မော်တော်ကားနှင့် မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ၊ လေယာဉ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စစ်ဘက်နှင့် အာကာသယာဉ်နှင့် အခြားဆက်စပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများသည် ၎င်း၏ EL ထုတ်ကုန်များနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး ပိုမိုလှပလာမည်ဖြစ်သည်။
စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ KTV၊ ဘားများ၊ နိုက်ကလပ်များ၊ ကလပ်အတွင်းပိုင်းအလင်းရောင်၊ ဇာတ်ခုံအစွန်း၊ မျက်နှာကျက်အစွန်း၊ အပြင်ဘား၊ ပရိဘောဂအလှဆင်ခြင်း၊ အိမ်အလှဆင်ခြင်း၊ DIY တစ်ကိုယ်ရေနေရာလွတ်များတွင် EL အအေးဓာတ်ပါသော အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီအမည်၊ ဌာနများ၊ ကွန်ဖရင့်ခန်းများ၊ ဧည့်ခန်းဆိုင်းဘုတ်များ အစရှိသည်ဖြင့် ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ပြက်ပြက် ခေတ်မီပြီး စတိုင်ကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေရန်အတွက် ကုမ္ပဏီအမည်၊
EL ကို အဝတ်အစား၊ ဘောင်းဘီ၊ ဖိနပ်၊ ဦးထုပ်၊ အိတ်၊ မျက်မှန်၊ နာရီနှင့် အခြားဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များအပြင် မွေးနေ့များ၊ မင်္ဂလာပွဲများ၊ ပွဲတော်များ၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့များ၊ အခမ်းအနားများနှင့် အခြားသော နှုတ်ခွန်းဆက်ကတ်များ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သူငယ်ချင်းများနှင့် အခြားသူများ၏ လေးမြတ်မှုကို အနိုင်ယူရန်။
စီးပွားရေးကြော်ငြာ၊ မြင်းပြိုင်ပွဲအလင်းရောင်ကြော်ငြာ၊ ပါးလွှာသောမီးပုံး၊ ပရိုမိုးရှင်းနောက်ခံ၊ အားကစားပွဲများ၊ ဂိမ်းများ၊ အပြင်အဆင်ပွဲများ၊ ပါတီ၊ အမျိုးမျိုးသော ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် စကားပြောမြင်ကွင်းကို နောက်ခံအလင်းပြုလုပ်ရန် EL အအေးဖလင်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ၊ မီးဆိုင်းဘုတ်များ၊ လမ်းဆိုင်းဘုတ်များနှင့် အခြားအရာများပါရှိပြီး၊ အလွန်ပါးလွှာပြီး ခေတ်မီသောလူ့အဖွဲ့အစည်းနည်းပညာနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ကာဗွန်ချွေတာမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များကို ထင်ဟပ်စေသည်။
El Cold Plate သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အလင်းစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။အလုပ်သဘောမှာ ဇင့်ဆာလ်ဖိုဒ် (Phospher Partides) အမှုန်အမွှားနှစ်ခုကြားတွင် ပိတ်မိနေခြင်းဖြစ်သည်။
AC လျှပ်စစ်စက်ကွင်းအား တိုင်၏ AC ဗို့အားဖြင့် မောင်းနှင်သည်။အီလက်ထရွန်များသည် တောက်ပသော အလွှာအတွင်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ရွေ့လျားကာ တောက်ပနေသော အက်တမ်များကို အသက်ဝင်စေပြီး လုံလောက်သော စွမ်းအင်ရရှိရန် အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားနေသော အီလက်ထရွန်များသည် တောက်ပနေသော အလယ်ဗဟိုနှင့် ချောင်းစပ်ပစ္စည်းများနှင့် ဆောင့်မိပါသည်။
အီလက်ထရွန် စွမ်းအင်ဝင်ရိုးစွန်းများ ခုန်-ပြောင်း-ပြန်ပေါင်းစည်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အအေးဓာတ်ထုတ်လွှတ်မှုတို့ကို ဖြစ်စေသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားနေသော အလင်းရောင်ဟု ဆိုလိုသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်ဆန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ယေဘူယျ လည်ပတ်မှုဗို့အား AC40V~AC220V အတွင်း ချိန်ညှိထားပြီး လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ 50 Hz မှ 4000 Hz အထိ ရှိနိုင်ပါသည်။ဗို့အား သို့မဟုတ် ကြိမ်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် el အအေးအလင်းစာရွက်၏ တောက်ပမှုကို တိုးစေမည်ဖြစ်ပြီး၊ အအေးဓာတ်အရင်းအမြစ်၏ အရောင်သည် အပြာရောင်ကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
အအေးဓာတ်၏ အလင်းတန်းလွှာသည် ယေဘူယျ ရိုးရာအလင်းရင်းမြစ်ကဲ့သို့ ရုတ်တရက် သေဆုံးခြင်းဖြစ်စဉ်မျိုး မရှိပါ။အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုပြီးနောက်၊ အအေးဓာတ်၏တောက်ပမှုသည် တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာမည်ဖြစ်သည်။ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆတို့သည် အေးသောအလင်းရောင်၏ သက်တမ်းကို ထိခိုက်စေသော အရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်သည်။
ယခင်- Membrane ခလုတ်ခလုတ်
နောက်တစ်ခု: LED မီးလမ်းညွှန်ပန်းကန်